मान्छेको चेतना खुले जस्तो भएन ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
मान्छेको चेतना खुले जस्तो भएन ?
हजारौं वर्ष पुराकालमा भगवान बुद्धले “अहिंसा परमो धर्म ” भन्दाभन्दै आजसम्म हाम्रा मान्छेको चेतना खुले जस्तो भएन । बाहुनहरुको चलखेलमा आज पनि निमुखा प्राणीको देविदेवता को निहुँमा बलि लिने प्रथा जिवंत छ । सिनो लिनु बहिष्कार गरौं । यिनिहरुले पशु हत्या गरेकोमा किन संलग्न हुने ? रांगाको सिनो स्वीकार गर्दै मनुवादी व्यवस्था किन कायम राखी राख्ने ? सिनो स्विकारेको निहुँमा किन दलित जातीको हो भनेर अपहेलित भैइ रहने ? तिनिहरुका बलि चडाएको रांगा को मांसु तिनी आफै खान । बजारको होटेलमा खांदै छन् ।
घरमा लुकिछिपी खांदै छन् । अब देविको निहुँमा प्रसादी सम्झेर सार्वजनिक खाये के होला ? मांसाहारी शाकाहारी दुमै सरहको मानव र जनावर सम्म यस् ब्रह्माण्डमा छन् । कसैको निजि जीवनमा खानपिनमा प्रहार गरिसकिन्न । तर … देवि देवताको निहुँमा बलि चडाउने अनि गरीब साधारण दाबिएको समाजलाई सिनो लिनुपर्ने भनेर दबाव गर्ने कहाँ सम्म उचित होला ? आस्थाको नाममा येस्तो कृति निन्दनीय छ ।
बौद्धको कुरा गर्ने अनि बौद्धको “अहिंसा परमो धर्म ” नमान्ने ? सरकारको मुलुकी ऐनमा सार्वजनिक क्षेत्रमा ( खुलामा ) पशुबली दिने निषेध गरिएको छ । मन्दिर भने सार्वजनिक क्षेत्रमा पर्छ । कृपया कानुनी कार्यवाही कडाइका साथ कार्यन्वयन गरियोस् ।